Ogaden News Agency (ONA) – Kumanaan kale oo ka qaxaya bariga Ghouta ee Dalka Suuriya.
Kumanaan kale oo ka qaxaya bariga Ghouta ee Dalka Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ March 25, 2018
Magaalooyinka Zamalka, Arbin iyo Ain Tarma ayaa laga daad gureeyay dad shacab ah, dagaalamayaasha mucaaradka iyo qoysaskooda. Mucaaradka ayaa lagu wadaa inay u ambabaxaan Gobolka Idlib oo ah halka ay ku xooganyihiin.
Daad gureynta dagaalamayaasha mucaaradka ayaa qeyb ka ah heshiis uu gadhwadeen ka yahay Ruushka oo lagu samata bixinayo mucaaradka. Boqolaal qof ayaa lagu dilay deegaankan tan iyo intii ciidamadda dowladda Suuriya oo taageero ka helaya Ruushka ay bilaabeen duullaan ka dhan ah mucaaradka bishii lasoo dhaafay.
Ruushka ayaa sheegay in inkabaan boqol kun oo qof ay ilaa iyo imika laga samata bixiyay bariga Ghouda. Mar sii horeysayna, dowladda Madaxweyne Bashar Al-Asad ayaa 13 askari iyo dhowr qof oo rayid ah ku bedelatay 5 kamid ah askarta mucaaradka.
Ururka Axraar-Al Shaam ee ka dagaalama Suuriya, kana mid ah kooxaha ka dagaalama bariga Ghouta ayaa ogolaaday inay hubka dhigaan, si ay u helaan marin ay uga baxaan bariga Ghouta.